Vaovao - Maninona no zava-dehibe tokoa ireo famantarana LED any ivelany
Ny famantarana any ivelany dia tsy amin'ny fironana fotsiny fa mpanelanelana amin'ny fampiroboroboana ny orinasanao. Raha tompona na fivarotana kely aza ianao, dia anjaranao izany ary tena zava-dehibe aminao ny misarika ny sain'ny mpanjifanao mety. Raha miaina amin'ny vanim-potoana maoderina isika, dia tsy misy intsony ireo famantarana an-tanana. Mbola mampiasa azy ny olona fa tsy manintona intsony. Mbola manontany tena ihany ve ianao hoe tokony hividy takelaka tarihin'ny olona eny ivelany? Homena 5 izahay antony tokony hampiasanao vola amin'ny jiro taratra ivelany.
Nahoana no zava-dehibe izany?
Ny haben'ny litera, fantatra amin'ny anarana hoe haavon'ny litera, no anton-javatra mamaritra ny halaviran'ny hafatrao azon'ny olona manana maso antonony. Ny fahazoana izany tsy nety izany dia hitarika anao ho kely loatra ny taratasinao ka tsy azo vakina na lehibe loatra. Misy fiatraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny famantarana nataonao ary fahombiazany ny fanaparitahana hafatra.
Duden dia mikoriana amin'ny toerany ary manome izany amin'ny regelialia ilaina. Firenena paradisematika izy io, izay misy fehezan-teny voaendy manidina ao am-bavanao.
Antony iray hafa hampiasana famantarana any ivelany koa ny famirapiratany sy ny fisarihana olona marobe na dia mandritra ny ora miadana aza. Raha eny ivelan'ny tananao ny orinasanao, dia ity safidy tonga lafatra ity ho an'ny orinasanao. Tsy ireo famantarana ireo ihany no mamiratra fa mazava kosa ny mahita azy. Midika izany fa ataonao manamora ny fahitan'ny mpanjifanao ny zavatra arosonao dia hanatona anao izy ireo.
Fotoana fandefasana: Aug-09-2020